UHunt ukhathazekile ngeBucs - Ilanga News
Home Ezemidlalo UHunt ukhathazekile ngeBucs
UHunt ukhathazekile ngeBucs
Umqeqeshi weChiefs ubambe umoya ngezilomo
USAMIR Nurkovic weChiefs noThembinkosi Lorch wePirates abazobe bebhekiwe kwiSoweto Derby ngoMgqibelo. IZITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
UMQEQESHI weKaizer Chiefs uGavin Hunt ukhathazekile ngesimo sabadlali bakhe ngaphambi komdlalo obucayi wale kilabhu nezimbangi ezinkulu zayo i-Orlando Pirates.
Lezi zinkunzi zikanobhutshuzwayo wakuleli zizodudulana ko-weDStv Premiership ngoMgqibelo ngo-15h30 e-Orlando Stadium, eSoweto.
La makilabhu azokube esetholana phezulu okwesithathu kule sizini njengoba ehlangane kwi-semi final yeMTN8 ebiyimilenze emibili. Emlenzeni wokuqala iBucs inqobe ngo-3-0 kwathi kowesibili yadlula ngo-2-0 okwenze kwaba ngu-5-0 sekuhlanganiswe imilenze.
UHunt ubesanda kufika kwi-Chiefs ngesikhathi ebingelelwa ngalesi sibhaxu okwenza abalandeli beziMpofana balindele okungcono kulo mdlalo njengoba le kilabhu seyiqalile ukukhombisa izimpawu zokuhlangana ngaphansi kwalo mqeqeshi, osekuyenze yasuka nangasemsileni we-log njengoba isikwi-top 8.
UHunt uthi njengoba ezokuya kulo mdlalo nje, umincile ngabadlali bakhe abalimele uKhama Billiat, uRamahlwe “Rama” Mphahlele noKgotso Moleko.
“Nginovalo njengoba siya kulo mdlalo wangoMgqibelo ngoba amagoli kasiwashayi ekubeni nasemuva sibuye singamaki kahle.
“Okuhle nje wukuthi sizoya kulo mdlalo silutholile usuku lokuphumula. Ngibambe umoya nje ukuthi njengoba sinabadlali abalimele kubuye okungenani oyedwa noma ababili,” kusho uHunt.
UHunt ukhuluma ngeyokuphumula nje, yingoba ezakhe zibambane neBaroka FC ngo-1-1 kowe-ligi ngoLwesibili kusihlwa eFNB Stadium, eSoweto. IziMpofana kazizange zishaye goli kulo mdlalo njengoba womabili eqotshelwe enethini yiBaroka. Elokuqala lishaywe nguThamsanqa Masiya, kwathi elokulinganisa kwaba wumkhonto ogwaze ekhaya kaGoodman Mosele.
Ephawula ngalo mphumela uHunt uthe: “Kulo mdlalo weBaroka kangigculisekanga neze ngoba sakhe amathuba kodwa sangawasebenzisa, uLeonardo Castro nje bekufanele avalele amagoli amabili kulo mdlalo kodwa akangakwenza lokho. Negoli esilivuzisile kalingigculisanga. Phela sinabadlali abade emuva kodwa umgadli weBaroka ukwazile ukubehlula ebholeni lasemoyeni elihlale kuzakwabo walivalela enethini.”
Kubadlali okubhekwe ukuba bashukumise lo mdlalo nguSamir Nurkovic obengekho kweyeMTN8, uLebogang Manyama, uKearyn Baccus noReeve Frosler kwiChiefs kanti iPirates ijwayele ukuthwalwa nguThembinkosi Lorch, uVincent Pule, uFortune Makaringe noDeon Hotto ukukha nje phezulu.
Previous articleImpi yamazwi kuZimdollar nensizwa ebigunda igceke
Next articleAbalingisi “badube” ukuqopha